Fanatanjahantena sy ny baolina kitra Mila tohanana mafy mba tsy hitsotsorika indray
Efa niomana ary manana tolo-dalàna hanatsarana ny tontolon’ny fanatanjahan-tena izay efa vita boky hatolotra hodinihina sy holaniana ao amin’ny Antenimieram-pirenena ny depiote Randriamanampisoa Alfred, izay filohan’ny Klioban’ny Baolina kitra Elgeco Plus.
Fitantanana ny baolina kitra Malagasy Manomboka indray ny politika maloto ?
Efa niteraka adihevitra samihafa ny fahatarafana fijapiana ara-politika ny fahombiazan’ny Barean’i Madagasikara, izay nezahin’ny maro nampanginina mba tsy hisian’ny tsy fitovian-kevitra, ka noderaina hatrany ny ezaka fanohanana tamin’ny endriny maro.
Ekipan’ny Barea Nahazo tambin-karama 905 tapitrisa Ariary
Notoloran’ny fitondram-panjakana Malagasy ny mariboninahitra « Chevalier de l’Ordre National », teny amin’ny lapam-panjakana Iavoloha omaly alatsinainy 15 jolay 2019, ireo mpilalaon’ny Barean’i Madagasikara avy niatrika ny CAN 2019 niaraka tamin’ny mpanazatra Nicolas Dupuis.
Barea hikatroka amin’i Mozambika Manohy ny fanazarantena etsy Mahamasina koa
Toy ny efa nahazatra azy ireo tao ho ao dia manohy ny fanazarantena hataony eny Carion sy etsy amin’ny kianjan’i Mahamasina mifandimbindimby ny Barea hiatrika ny lalaon’ny nosy 2019 sy ny Barea hiatrika ny fifanintsanana CHAN 2020.
Mpilalao basikety Malagasy ho any Maorisy Nahazo 6.000.000 Ar avy amin’ny minisitra mpiahy
Mitohy hatrany ny fifanomezan-tanana sy fanampiana ny ekipam-pirenena Malagasy hiatrika ny lalaon’ny nosy any Maorisy.
Faly sy ravo ny Malagasy Vitan'ny Barea ny fampihavanam-pirenena
Tafaray tanteraka ny tia sy ny manina ny andron’ny sabotsy 13 jolay teo nandritra ilay fitsenana makotrokotroka ny Barean’i Madagasikara.
CAN 2019 Sénégal sy Algérie no hiatrika ny famaranana
Ny Lions de la Teranga avy any Sénégal no ekipa voalohany tafita eo amin’ny lalao famaranana ny CAN Egypte 2019 rehefa nandresy ny Aigle de Carthage
Hanainga anio hihazo ny nosy Maorisy hiatrika ny fifaninanana “Trophée International de Foot-ball”
any Port Louis Maurice sokajy 10 sy 13 taona ny 4 sy 5 aogositra izao ny Efc Academica mpitaiza katitakely amin’ny sehatry ny baolina kitra. Ny talata teo dia nomen’ny ben’ny tanànan’Iarivo Lalao Ravalomanana tsodrano sy vatsin-dalana tetsy amin’ny Lapan’ny tanàna Analakely izy ireo. 31 no ao anatin’ny delegasiona Efc Academica hanainga anio, ny 5 amin’ireo raiamandreny sy mpitantana.
MONDIAL DES VOLCANS
Voahosotra ho tompondaka eran-tany amin’ny fifaninanana an’olon-tokana “Mondial des Volcans 2018” notontosaina tany amin’ny “Maison des Sports de Clermont France” tamin’ny sabotsy 24 jolay teo, ilay tovolahy Malagasy Zigle “Rakotondrainibe Jean Daniel “, 17 taona. Resiny tamin’ny 13-7 ilay Frantsay Sébastien Rousseau tompondaka tamin’ny 2016.
Mitohy hatrany ny fiaraha-miasa eo amin'ny AATM “Association des Artistes du Théâtre Malagasy”/ FMTM “Fikambanan'ny Mpanao Teatra Malagasy” amin'ny “Alliance Française” eo amin'ny famohazana indray ny teatra eto Antananarivo. Ny Tropy Antananarivo Teatra no nisehatra ny piesy Lakile 2 natrehin’ny minisitry ny kolontsaina sy ny minisitry ny harena ankibon’ny tany tamin'ny alahady 25 jolay 2018 teo. Ny Tropy Jeannette andiany fahatelo B kosa no hamoha ny tantara “Ny tsy amoizako azy” nosoratan'i Jasmina Ratsimiseta amin’ny tolakandron’ny alahady 05 aogosita 2018 ho avy izao mbola etsy amin’ny AFT Andavamamba ihany.